YEYINTNGE(CANADA): Thursday, December 08
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှုးဟောင်း ဦးလွင်၏ ကိုယ်ရေးအထ္ထုပတ္တိအကျဉ်း
by Burma VJ Media Network on Thursday, December 8, 2011 at 7:07am
ဦးလွင် (ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်လွင် - အငြိမ်းစား)
(၁၉၂၄ - ၂၀၁၁)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှုးဟောင်းဖြစ်တဲ့ ဦးလွင်ဟာ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ ည ၈း၄၀ အချိန်က လူကြီးရောဂါနဲ့ အမှတ် (၁၅ A) ကမ္ဘောဇရိပ်သာ နေအိမ်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် ၈၈ နှစ် ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကွယ်လွန်ချိန်မှာ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်စုစုလွင်နှင့် သားမက် ဦးထင်ကျော် (စာရေးဆရာ ဒလဘန်း) နှင့် မြေး ၃ ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။
- သုံးခွမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) မှ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်။
- ၁၉၂၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် အဖ ဦးဘသာနှင့် အမိ ဒေါ်သိန်းတို့မှ မွေးဖွားသည်။
- ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမတိုင်မီ ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် သူငယ်တန်းမှ ဆယ်တန်းအထိ ပညာသင်ကြားခဲ့။
- ၁၉၄၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၅ ခုနှစ်အထိ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (BIA)၊ ဗမာ့ကာကွယ်ရေး တပ်မတော် (BDA)၊ ဗမာ့မျိုးချစ်တပ်မတော် (PBF) တို့တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ BDA ပထမအပတ် ဗိုလ်သင်တန်းဆင်း၊ ဂျပန်ပြည် ဘုရင့်တပ်မတော် စစ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းဆင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိဖြစ်လာပြီး ၁၉၄၆-၅၈ ခုနှစ်တွင် သနက(၅)၊ အမှတ် (၇) ခြေလျင် တပ်ပေါင်းစုဌာနချုပ်၊ ကချင် (၁)၊ ခမရ (၁ဝ၄) တို့တွင် ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်အထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
- ၁၉၅၂ မှ ၁၉၅၄ ခုနှစ်အထိ အဆင့်မြင့် စစ်သင်တန်းများကို အင်္ဂလန်ပြည် စစ်တက္ကသိုလ်များတွင် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
- ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ဖြင့် စစ်သံမှူး (အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု)၊ ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် လပခ ဒုတိယတိုင်းမှူး၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ရတခ တိုင်းမှူး၊ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားစီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ၁၉၇၁ တွင် တပ်မတော်မှ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ အလုပ်ဝတ္တရားများကို ပြန်လည်အပ်နှံခွင့်ပြုခဲ့။
- စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် တတိယအကြိမ် ပါတီညီလာခံ၌ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်မခံတော့ဘဲ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးမှ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်၊ ၁၉၈ဝ ပြည့်နှစ်တွင် အနားယူခဲ့။
- လွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်းဝင် ပထမအဆင့်၊ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည် ပထမအဆင့်၊ သီရိပျံချီဘွဲ့တို့ ချီးမြှင့်ခြင်း ခံခဲ့ရ။
- ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီး ပြီးနောက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တွင် ဘဏ္ဍာရေးမှူး အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့။
- ဦးတင်ဦး၊ ဦးကြည်မောင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရပြီးနောက် ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့တွင် အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် ၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသည့် ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ၌ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဆက်လက်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံခဲ့ရ။
- ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၃ဝ ရက်နေ့ ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းကြီး ဖြစ်ပွားစဉ် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံခဲ့ရပြီး ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့။
- ဇနီးမှာ ဒေါ်တင်တင်မလေးဖြစ်ပြီး သမီး ဒေါ်စုစုလွင်၊ သား ဦးကျော်ဆန်းလွင်တို့ ထွန်းကားခဲ့။
၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့က ဦးလွင်ဇနီးရဲ့ ဈာပနအခမ်းအနားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးလွင်တို့ တွေ့ဆုံစဉ်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/08/20110အကြံပြုခြင်း
ဗကသ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုဇော်လင်းထွန်းရဲ့ ရက်လည်ဆွမ်းကျွေး
ထောင်တွင်းက ရရှိခဲ့တဲ့ အသည်းကင်ဆာရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ ဗကသ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ကိုဇော်လင်းထွန်းရဲ့ ရက်လည်ဆွမ်းကျွေး အခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့က သူ့ရဲ့မွေးရပ်မြေဖြစ်တဲ့ ပဲခူးတိုင်း ကျောက်တံခါး မြို့နယ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီဆွမ်းကျွေးကို ကျောင်းသားလူငယ်တွေ၊ ရန်ကုန်မြို့က ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ ကျောက်တံခါး မြို့နယ်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေ လာရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ကိုဇော်လင်းထွန်းဟာ ဗကသ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ဗကသ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေး အတွက် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက် အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ မတရားအသင်းဥပဒေ၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေတွေအရ ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။
အင်းစိန်ထောင်တွင်း အကျဉ်းကျခံနေရစဉ် ကျန်းမာရေး ဆိုးရွားလာတဲ့အတွက် ဆေးစစ်ရာမှ အသည်း ကင်ဆာ ရောဂါနဲ့ ၃ လမှ ၆ လအထိသာ အသက်ရှင်သန်ခွင့်ရတော့မယ် ဆိုတော့မှ အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးတာ ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဇော်လင်းထွန်းဟာ ထောင်တွင်းကနေ ရရှိခဲ့တဲ့ အသည်းကင်ဆာရောဂါနဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် ၃၈ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဌေးဟာ ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရကာ အခုအခါ ရှေ့နေလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခြင်း ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဌေးရဲ့ သားကြီးဖြစ်သူ နန္ဒစစ်အောင် (ခ) စစ်ကိုအောင်ဟာ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (ဗကသ) တွင် အတွင်းရေးမှူးဖြစ်ကာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး အခုအခါ ဖားအံထောင်မှာ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ထောင်ဒဏ် နှစ် ၂ဝ ကျခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုစစ်ကိုအောင်ဟာ အသည်းကင်ဆာရောဂါနဲ့ သေဆုံးသွားသူ ကိုဇော်လင်းထွန်းတို့နဲ့အတူ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ ဗကသ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက် အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ မတရားအသင်းဥပဒေ၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအက် ဥပဒေတွေနဲ့ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရန်ကုန်မြို့ စိန့် မေရီ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ နှစ်တစ်ရာပြည့် ဂျူဘီလီပွဲတော် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကို တက်ရောက်
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့ စိန့် မေရီ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ နှစ်တစ်ရာပြည့် ဂျူဘီလီပွဲတော် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအခမ်းအနားမှာ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့ ဗာတီကန်က ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး (ဘန်နီဒစ် )Benedict ရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ် (ကာဒီနယ် တန်နတို ရက်ဖေးလီ မာတီနို) Cardinal Tenato Raffaele Martino ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
စိန့်မေရီ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ ဒီပိတ်ပွဲအခမ်းအနားမှာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Benedict ရဲ့ အထူးသဝဏ်လွှာကို ဖက်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီဂျူဘီလီပွဲတော်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ကတည်းက စတင်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ အထိ ၁၀ ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
စိန့်မေရီ ကက်သလစ် ဘုရားကျောင်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း တစ်ရာလောက်ကတည်းက ပြင်သစ်နိုင်ငံ သာသနာပြု ဘုန်းတော်ကြီးတွေ တည်ထောင်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံအခြေစိုက် နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့(RSF)မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် ချီးမြှင့်သည့် တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး သတင်းမီဒီယာဆုကို Eleven Media Group(Weekly Eleven News Journal) မှရရှိ
Thursday, 08 December 2011 03:49
Le Monde သတင်းစာ၏ Director ဖြစ်သူ Éric Israelevitch က ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး သတင်းမီဒီယာဆုရရှိသည့် Eleven Media Group(Weekly Eleven News Journal)အား ဆုပေးအပ်စဉ်
ပြင်သစ်နိုင်ငံအခြေစိုက်နယ်စည်း မခြားသတင်းထောက်များအဖွဲ့(Re-porters Without Borders-RSF) မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် ချီးမြှင့်သည့် တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး သတင်းမီဒီယာဆုကို Eleven Media Group (Weekly Eleven News Journal)မှ ရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့က ပဲရစ်မြို့၌ ကျင်းပခဲ့ပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ Le Monde သတင်းစာ၏ Director ဖြစ်သူ Éric Israelevitch ကတက်ရောက်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် Eleven Media Group မှ Weekly Eleven News Journal အယ်ဒီတာချုပ် ကိုဝေဖြိုးနှင့် Premier Eleven Sports Journal တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ကိုမြတ်ထွဋ်ဝင်းတို့ တက်ရောက်လက်ခံရယူခဲ့ပါသည်။
ပဏာမရွေးချယ်ထားသည့် Weekly Eleven News Journalအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာမှ သတင်းမီဒီယာများ
ယခုနှစ်တွင် တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး သတင်းမီဒီယာဆုနှင့် တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး ဂျာနယ်လစ်ဆုနှစ်ဆုကို ပေးအပ်ခဲ့ပြီး သတင်းမီဒီယာဆုကို Eleven Media Group (Weekly Eleven News Journal)မှ ရရှိခဲ့ပြီး ယခုနှစ်အတွက် Journalist of the Year ဆုကို ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှ ကာတွန်း ဆရာ Ali Fersat က ရရှိသွားခဲ့သည်။
ournal အယ်ဒီတာချုပ် ကိုဝေဖြိုးနှင့် Premier Eleven Sports Journal တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ကိုမြတ်ထွဋ်ဝင်း
အကောင်းဆုံး သတင်းမီဒီယာဆု ရွေးချယ်ရန်အတွက် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှ Emeequis၊ အာဖဂန်နစ္စတန် 8 Sobh ၊ ဘာရိန်းနိုင်ငံ မှ AL-Wazat ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ Weekly Eleven Journal ၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံမှ Uznews နှင့် ဆူဒန်နိုင်ငံမှ Ajras Al-Hurriya ဂျာနယ်များအား ပဏာမရွေးချယ်ခဲ့ပြီးမှ ပြန်လည်ရွေးခြင်းဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံး ဂျာနယ်လစ်ဆုအတွက် ဆီးရီးယား၊ တရုတ်၊ ဂရိ၊ ကိုလံဘီယာ၊ အီရန်၊ ဘူရွန်ဒီနိုင်ငံတို့မှ ဂျာနယ်လစ်များ အား ပဏာမရွေးချယ်ခဲ့ပြီးမှ ပြန်လည်ရွေးချယ်ပေးခဲ့သည်။ ယခင်က ပြင်သစ်နိုင်ငံအခြေစိုက် နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့(Reporters Without Borders-RSF) မှချီးမြှင့်သည့် ဆုများဖြစ်သော တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး ဂျာနယ်လစ်ဆု (Journalist of the Year)ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်မှ ရရှိခဲ့ဖူးသည်။ တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး အွန်လိုင်းမီဒီယာဆု(Cyber Dissident) ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ဦးသူရခေါ် ဇာဂနာနှင့် ကိုနေဘုန်းလတ်တို့က ပူးတွဲ ရရှိခဲ့ဖူးသည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် RSF ကပေးအပ်သည့်ဆုကို ဒေါ်စမ်းစမ်းနွဲ့မှ ရရှိခဲ့ဖူးကြောင်း သိရသည်။ နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့သည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှစ၍ ဂျာနယ်လစ်များနှင့် မီဒီယာများကို ဂုဏ်ပြုဆုများ ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ယခုနှစ် ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့တွင် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဂျာနယ်လစ် ၁၂ ဦးပါဝင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဆုသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၂၀၀ ကျော်မှ ရွေးချယ်ချီးမြှင့်သည့်ဆုဖြစ်ပြီး မီဒီယာလောကတွင် အလေး ထားသည့်ဆုများအနက် တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆုပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားတွင် Eleven Media Group မှ Weekly Eleven News Journal အယ်ဒီတာချုပ်ကိုဝေဖြိုး ပြောကြားသော ကျေးဇူးတင်စကား
လေးစားရပါသော၊ ကြွရောက် ချီးမြှင့်သော လူကြီးမင်းများနှင့် နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများခင်ဗျာ- EMG ရဲ့ကိုယ်စား R.S.F ကို လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
ဒီဆုနဲ့ပတ်သက်လို့ အဓိကထိုက်တန်သူတွေဟာ Weekly Eleven News မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေအတွက် နည်းမျိုးစုံနဲ့ အနစ်နာခံ၊ အဆုံးရှုံးခံခဲ့ရတဲ့သူတွေရဲ့ကိုယ်စား ကျွန်တော်တို့ EMG ဒီဆုကို လက်ခံရယူခဲ့တယ်လို့ပဲ ယူဆပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာ ဒီဆုရရှိခဲ့တဲ့အတွက် စိတ်ဓာတ်တက်ကြွဂုဏ်ယူရပေမယ့် တစ်ဖက်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင် ဂျာနယ်လစ်တွေဟာ ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပြီး အကျဉ်းထောင်ထဲမှာလည်း တချို့ကျန်ရှိနေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အပြင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မမေ့ မလျော့သင့်တဲ့သူတစ်ဦးကတော့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်း ကိုမင်းကိုနိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် အခန်းကျဉ်းထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲ ယုံကြည်ချက်ကို မစွန့်လွှတ်ဘဲ နေနိုင်ခဲ့တဲ့ သတ္တိနဲ့ စွန့်လွှတ်မှုတွေ၊ သူရဲ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ စွန့်လွှတ်မှုတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်တော့မှ မေ့လျော့မထားသင့်ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ EMG ဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်ရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ဦးဆောင်မှု၊ မူဝါဒ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် မှန်ကန်မှုတွေဟာလည်း ဒီဆုရရေးမှာ အဓိကနေရာက ပါဝင်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတစ်ဦးအနေနဲ့ သူ့ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ၊ လူမျိုး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း အကျိုးစီးပွားကို တစ်ကြောင်းတည်းသောစိတ်နဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်လည်း ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒီနေရာမှာ ဒီလိုစကားပြောခွင့် ရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အပြောင်းအလဲတွေ စတင်ဖြစ်ပေါ်နေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ လူအများကြီးကတော့ မျှတတဲ့ တရားစီရင်ရေးစနစ်နဲ့ ဥပဒေစိုးမိုးမှုရဲ့ အကျိုးတွေကို ခံစားနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ၊ မှားယွင်းစွာ အပြစ်ပေးခံရသူတွေဟာ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ မျှတတဲ့ တရားစီရင်ရေးစနစ်နဲ့ မျှတတဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် မမှိတ်မသုန် ဆောင်ရွက်ဖို့ သံန္နိဌာန်ချမှတ်ထားကြောင်း နောက်ဆုံး ပြောကြားလိုပါတယ်။
၂၀၁၁ခုနှစ် ပဒိုမန်းရှာ လူငယ်ခေါင်းဆောင်ဆုရှင်ကို စတင် အဆိုတင်သွင်းနိုင်ပြီ
Submitted by admin on Thursday, 8 December 2011--
ဒီဇင်ဘာလ ၈ရက်။ နန်းသူးလေ (ကေအိုင်စီ)
ပဒိုမန်းရှာ လူငယ်ခေါင်းဆောင် ဆုကို ၂၀၁၁အတွက် ဆုရှင်များကိုစတင် အဆိုတင်သွင်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဖန်းဖောင်ဒေးရှင်း (Phan Foundation) မှ ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဆုမှာ အသက် ၃၅နှစ်ထက် မကျော်လွန်သေးသူ ကရင်လူငယ်များကို အဆိုတင်သွင်းနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ အသက်၊ နေထိုင်ရာဒေသ၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအပြင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် လူငယ်ခေါင်းဆောင်ဆုကို ရရှိထိုက်သူဖြစ် ကြောင်း အဆိုတင်သွင်းရာတွင် ဖော်ပြပေးရမည် ဖြစ်သည်။
ပဒိုမန်းရှာလူငယ်ခေါင်းဆောင်ဆုကို ကရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွက် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုလုပ် ငန်းများတွင် စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည့် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ကရင်လူငယ်များကို ဒီဇင်ဘာ ၃၁ရက်နေ့ နောက် ဆုံးထား၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း ဖန်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ ကြေညာချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
ယခင်က ဆုရှင်များကို ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ရက်နေ့(ကရင်တော်လှန်ရေးနေ့)တွင် ဆုပေးအပ်သွားမည်ဟု သတ်မှတ်ထားခဲ့သော် လည်း ယခုနှစ်တွင် ဖန်းညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ အချိန်အခက်အခဲကြောင့် ထိုဆုကို ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ရက်နေ့တွင် နောက်ဆုံး ထားကာ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ဆုရှင်များကို လာမည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် န၀မအကြိမ်မြောက် Karen Unity Seminar တွင် ပြောင်း လဲပေးအပ်သွားမည်ဟု ဖန်းဖောင်ဒေးရှင် တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်သည့် စောစေးစေးဖန်းက ပြောသည်။
ထိုဆုရရှိသူ လူငယ်အား ဖန်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်နှင့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂,၀၀၀ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းဆုကို ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် ညောင်လေးပင်ခရိုင်မှ လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေသူ နော်ဖောကဘလာထူး၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဖာပွန်ခရိုင်မှ ကျန်းမာရေးမှူး စောညွှန့်ဝင်းနှင့် ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် ဘိတ်-ထားဝယ်ခရိုင်မှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း နော်ဒီဇင် ဘာဖောတို့အား အသီးသီး ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ပဒိုမန်းရှာလူငယ်ခေါင်းဆောင်ဆု ရရှိခဲ့ပြီးသူ သုံးဦးမှာ မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်များတွင် လုပ် ဆောင်နေမှုအတွက် များစွာ အားရမိကြောင်း စောစေးစေးဖန်းက ယခုလို ပြောသည်။
“လူငယ်ခေါင်းဆောင်ဆုကို ရရှိသွားကြတဲ့ သုံးဦးစလုံးက အခု သူတို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအသီးသီးမှာ နေပူမရှောင်၊ မိုးရွာမ ရှောင်ပဲ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး ကျနော်တို့ လူမျိုးအတွက် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားနေတာ တွေ့ရတဲ့အတွက် အရမ်းပဲ အားတက်မိပါ တယ်”ဟု ပြောသည်။
ဖန်းဖောင်ဒေးရှင်းကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ရက်နေ့တွင် လုပ်ကြံခံခဲ့ရသည့် ကေအဲန်ယူ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ချုပ်ဟောင်း ပဒိုမန်းရှာလားဖန်း၏ သားသမီးများဖြစ်ကြသည့် စောစေးစေးဖန်း၊ နမ့်ဘွားဘွားဖန်း၊ နမ့်ဇိုယာဖန်း၊ စလုံ့ဖန်းတို့မှ မိခင် နမ့်ကျင်ရွှေနှင့် ဖခင် မန်းရှာလားဖန်းတို့အတွက် ရည်စူးကာ ထိုနေ့တွင်ပင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပဒိုမန်းရှာလူငယ်ခေါင်းဆောင်ဆု အဆိုတင်သွင်းရန်အတွက် Email:bwaba.pan@phanfoundation.org, phone: +4477 39872481, Website: www.phanfoundation.org သို့ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ဘုရင် ကို အကြည်အညိပျက်စေမှု နဲ့အမေရိကန် ဘလောက်ဂါ တစ်ဦး ကို ထောင်ချ
by FNG on December 8, 2011
အသက် ၈၄ နှစ် အရွယ်ရှိ ပြီ ဖြစ်တဲ့ ထိုင်းဘုရင် ကို အကြည်အညိုပျက်စေမှု နဲ့ထိုင်း နိုင်ငံ မှာ
မွေးဖွား ခဲ့ တဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံ သား တစ်ဦး ကို ထိုင်း တရားရုံး က ဒီနေ့ ထောင်ဒဏ် နှစ် နှစ်
ခွဲ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ် လိုက်ပါတယ်။
ဂျိုးဝီချိုင်း ကော်မတ် ဂေါ်ဒွန် ဆိုတဲ့ ကော်လိုယာဒို ပြည်နယ် က ဘလောက်ဂါ နဲ့ကားဟောင်း
ရောင်းဝယ် သူတစ်ဦးဟာ ထိုင်း နိုင်ငံ မှာ ပိတ်ပင် ထား တဲ့ Paul Handley ရေးတဲ့
The King Never Smiles ဆိုတဲ့ စာအုပ် ကို ဘာသာပြန် ဆို ပြီး သူရဲ့အင်တာ နက် စာ မျက်
နှာ မှာ ဖော်ပြ ခဲ့ တဲ့ အတွက်ထောင်ဒဏ် အပြစ်ပေးခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ ဟာ ဒီစာ အုပ် ကို သူ
အမေရိကန် မှာ နေစဉ် ဘာသာ ပြန်ပြီး အင်တာနက် စာမျက် နှာ မှာ တင်ထား ခဲ့ တာ ဖြစ်ပြီး မေလ
က ထိုင်း နိုင်ငံ ကိုပြန်ပြီး ဆေးကုသ မှု ခံယူစဉ် သူ့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၅၅ နှစ်ရှိ ပြီ ဖြစ်တဲ့ ဂေါ်ဒွန် က သူဟာ လွတ်လပ် ပြောဆို ခွင့် ကို ပဲ လုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်
တာကြောင့် သူ့ကို မတရား တဲ့ ပြစ်ဒဏ် ပေး တာ ကို အမေရိကန် အစိုးရက ကူညီ မယ် လို့မျှော်
လင့် ကြောင်း ပြောပါတယ်။သူ ဟာ ထိုင်း မဟုတ် ဘူး ။ သူက အမေရိကန် ဖြစ်တယ်။ သူ ဟာ အမေ
ရိကန် နိုင်ငံ ကူး လက်မှတ် ကို ကိုင်ဆောင် ထား တာ ဖြစ်ပြီး ၊ ထိုင်း နိုင်ငံ ဟာ အမေရိကန် လို မျိုး
လွတ်လပ် စွာ ပြောဆို ပိုင် ခွင့် ရှိတဲ့ နိုင်ငံ မဟုတ် ဘူး လို့သူ က ပြောပါတယ်။
ဘန်ကောက် မြို့ရှိ အမေရိကန် သံရုံး က ကောင်းစစ်ဝန်ချုပ် အဲလိဇဘက် ပရက် ကတော့ ပြစ်ဒဏ်
ဟာ ကြီး လေး လွန်းတယ် လို့ဝေဖန်ပါတယ်။
ထိုင်း နိုင်ငံ မှာ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ဘုရင် စနစ် ကို ဝေဖန်ရင် ထောင်ဒဏ် နှစ်ရှည် ချမှတ် ခံရပြီး
ထိုင်း ဘုရင် ကို အကြည်အညို ပျက် စေတဲ့ ဖုန်း မက်ဆေ့ခ်ျ ပို့ မှု နဲ့ထိုင်း တစ်ဦး ကို ထောင်ဒဏ်
နှစ် ၂၀ ချမှတ် ခဲ့ ပါတယ်။
ကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲဘော် ကိုဇော်လင်းထွန်းအတွက် ရက်လည်ဆွမ်းကပ်
The Passing of Ko Zaw Lin Tun – ကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲဘော် ကိုဇော်လင်းထွန်းအတွက် ရက်လည်ဆွမ်းကပ်
ဒီမိုပန်း၊ ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်၊ ၂၀၁၁>
အသည်းရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သော ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် တဦးဖြစ်သည့် ကိုဇော်လင်းထွန်း၏ ရက်လည်ဆွမ်းသွတ် တရားနာကို ယနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးတိုင်း၊ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ ကျောက်တံခါးမြို့ နေအိမ်၌ပင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကိုဇော်လင်းထွန်း၏ ရက်လည်ဆွမ်းသွတ်ပွဲသို့ ကျောင်းသားလူငယ်များ၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားသူများနှင့် ညောင်လေးပင်မြို့နှင့် ကျောက်တံခါးမြို့တို့မှ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ကိုဇော်လင်းထွန်း၏ ရက်လည်ဆွမ်းကျွေးသို့ တက်ရောက်လာကြသူများ
ဖိုးဇော် (ခ) ကိုဇော်လင်းထွန်းသည် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တွင် အခြေစိုက်သည် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်(နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီ)နှင့်ဆက်သွယ်ပြီး နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့် ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၇ ခုနှစ်အထိ တကြိမ်၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိတကြိမ် အကျဉ်းထောင်ထဲတွင် စုစုပေါင်း (၁၅) နှစ်ကျော် နေထိုင်ခဲ့ရပါသည်။
ထို့နောက် အကျဉ်းထောင်ထဲတွင် အသည်းကင်ဆာရောဂါကို အပြင်းအထန်ခံစားနေရပြီး၊ သေရက်နီးကပ်လာ သည့်အချိန်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တည်ဆဲအစိုးရက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ အမိန့် တခုဖြင့် အကျဉ်းသားများကို လွှတ်သည့်အခါ ကိုဇော်လင်းထွန်း ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါသည်။
လွတ်မြောက်ပြီးနောက် လူ့လောကတွင် ၁ လနှင့် ၁၈ ရက်ခန့် အသက်ရှင်နေထိုင်ရပြီး၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ကျောက်တံခါးမြို့၊ နေအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုများတွင်
တလျှောက်လုံး ပါဝင်ခဲ့သည့် ကိုဇော်လင်းထွန်းအတွက် ရည်စူး၍ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်က ရက်လည် အခမ်းအနားတွင် ဆရာတော်များအား သင်္ကန်းတစုံကပ်လှူခဲ့ပါသည်။
ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်မှ ကပ်လှူခဲ့သည့် သင်္ကန်းတစုံ
တိုင်းပြည်အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့သည့် ကိုဇော်လင်းထွန်းကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း နှင့် တခြားဒီမို ကရေစီသူရဲကောင်းများနှင့်အတူ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီကြိုးပမ်းမှုမှတ်တမ်းတွင်လည်း ဂုဏ်ယူစွာ မော်ကွန်း ရေးထိုးအပ်ပါ ကြောင်း ဖေါ်ပြထားသည့် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်၏သဝဏ်လွှာကို ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်မှ ကိုရှိန်းရာဇာထွန်းက မိသားစုထံ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
သဝဏ်လွှာပေးပို့ခဲ့ရသည့်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မှ ကိုလင်းထက်နိုင်က
“ကိုဇော်လင်းထွန်းဟာ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှာ စွန့်လွတ်အနစ်နာခံ ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့အနေနဲ့ ကိုဇော်လင်းထွန်းရဲ့ စွန့်လွှတ်အနစ်ခံမှုတွေအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်းနဲ့ ဂုဏ်ယူကြောင်း သဝဏ်လွှာကို အခုလို ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။”
(အပေါ်ဆုံးက ပုံမှာ ကိုဇော်လင်းထွန်း မလွတ်မြောက်မီ၊ အကျဉ်းကျနေစဉ်၊ အင်းစိန်ထောင်ဆေးရုံသို့ ဆေးကုသရန် ပို့ဆောင်စဉ် တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ မိုးမခမိတ်ဆွေတဦး ထောင်ဝင်စာသွားစဉ် ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီမော်ကွန်းဝင် သူရဲကောင်းတဦး ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီ)
Published on December 8, 2011 by စိုင်းသိန်းဝင်း
ဒီကနေ့ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ ကေအိုင်အေ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တို့ ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားရာမှာ အစိုးရစစ်တပ်ဘက်က ဓာတုလက်နက်တွေ သုံးစွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ကေအိုင်အေဘက်က စွပ်စွဲပြောဆိုလာတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။
သတင်းဌာနတွေရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ အတိုက်ခိုက်ခံရသူ ကေအိုင်အေ စစ်သည်တွေဟာ လက်နက်ကြီးကျည် ကျရောက်ပေါက်ကွဲရာက ထွက်လာတဲ့ အနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင် အငွေ့တွေကို ရှူရှိုက်မိရာက ရုတ်ခြည်း အားအင်ဆုတ်ယုတ် နွမ်းခွေသွားခြင်း၊ အာခေါင်ခြောက်ပြီး ရေဆာလောင်လာခြင်း၊ အဆက်မပြတ် အော့အန်ခြင်း၊ မျက်နှာထူအန်းလာပြီး စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဝေဒနာ ခံစားရခြင်း၊ နား၊ နှာခေါင်းတို့မှ သွေးထွက်ခြင်း စတဲ့ ဝေဒနာလက္ခဏာများအပြင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော ဝေဒနာများကိုပါ ခံစားရကြောင်း သိရပါတယ်။
ဓာတုအဆိပ်ပါရှိတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ ဒုံးကျည်များအနက် တချို့ဟာ လေထဲမှာတင် ပေါက်ကွဲပြီး တချို့ကတော့ မြေပေါ်ကျပြီးမှသာ ပေါက်ကွဲတယ်လို့လည်း​ ကချင်သတင်း ဌာနက ဆိုပါတယ်။
လေထဲမှာတင်ပေါက်ကွဲတယ်ဆိုတဲ့ ဒုံးကျည်တွေဟာ မြန်မာ့တပ်မတော်သမိုင်းတလျှောက် သုံးဖူးခဲ့သမျှ လက်နက်တွေထဲမှာ တခုတည်းသော လေကွဲဒုံးကျည်အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ ၈၄ မမ ကားလ်ဂူး စတပ်ဖ်​ ၁ နောက်ပွင့်ရိုင်ဖယ်လ် ဒုံးကျည်တွေပဲ ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။
မြန်မာ့တပ်မတော်အနေနဲ့ အဲဒီ ဒုံးကျည် အမျိုးအစားကို ကိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း​ မရှိသေးပါဘူး။ သို့သော်လည်း ရန်သူ့တပ် တည်နေရာ မှတ်သားဖို့သက်သက် တီထွင်​ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ၈၄ မမ မီးခိုးဒုံး​ ၂ တွေမှာ အချက်ပြ မီးခိုးထွက်စေတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေအစား အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ထွက်စေတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ ထည့်သွင်း မွမ်းမံ အသုံးပြုတာမျိုးတော့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဓာတုလက်နက် အသုံးပြုမှုကို နိုင်ငံတကာက တရားဝင် ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားလို့ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ တိုက်ရိုက် ဝယ်ယူ အသုံးပြုရလောက်အောင် မိုက်မဲမှာ မဟုတ်သလို မြန်မာနိုင်ငံကို လက်နက်တင်ပို့​ ရောင်းချနေတဲ့ နိုင်ငံတွေထဲမှာဆိုရင်လည်း မြောက်ကိုရီးယားလို နိုင်ငံမျိုးကတောင် ရောင်းပေးဝံ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Figure 1. 81mm Recoilless Anti-Personnel Round, Photo: KNG.
ကေအိုင်အေဘက်က သိမ်းဆည်းရရှိထားပြီး ဓာတုအဆိပ်ပစ္စည်း ပါတယ်လို့ ယူဆထားကြတဲ့ ဒုံးကျည်အမျိုးအစား တမျိုးကတော့ တရုတ်နိုင်ငံက ထုတ်လုပ်တဲ့ ၈၂ မမ နောက်ပွင့်ရိုင်ဖယ်လ် ဒုံးကျည်ကို တုပ ပြုလုပ်ထားတဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံထုတ် ၈၁ မမ နောက်ပွင့်ရိုင်ဖယ်လ် ဒုံးကျည် ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်က ထုတ်လုပ်တဲ့ ၈၁ မမ ဒုံးကျည်နဲ့ ဒုံးပစ်လောင်ချာ​ ၃ ဟာ တရုတ်ရဲ့ ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ကို ထိပါးမှာစိုးတဲ့အတွက် ၈၁ မမ အမည်ခံ ထားခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး ဒုံးပစ်လောင်ချာ ပြောင်းဝ အချင်းက မူရင်း တရုတ်ဒီဇိုင်းအတိုင်း ၈၂ မီလီမီတာ ရှိပါတယ်။
ကွဲပြားတာကတော့ ဒုံးကျည်ရဲ့ စနက်အုံ အမျိုးအစားပါပဲ။ မူရင်း တရုတ်ဒီဇိုင်းမှာ AZDM စနက်အုံ အမျိုးအစားကို အသုံးပြုပြီး မြန်မာ့ ၈၁ မမ ဒုံးကျည်မှာတော့ လျှပ်စစ်စနက်အုံကို အသုံးပြုပါတယ်။
လျှပ်စစ်စနက်အုံရဲ့ အခြေခံအလုပ်လုပ်ပုံကတော့ ဒုံးကျည်ရဲ့ နှုတ်သီးဖျားမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ရှေ့ပိုင်းစနက်အုံ ၄၊ သလင်းကျောက်ပြား ၅ တုန်ခါမှုကြောင့် ထွက်ပေါ်လာတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို ဒုံးကျည်ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်းမှာ မြှုပ်နှံထားတဲ့ နောက်ပိုင်း စနက်အုံ ၆ ဆီ ပို့ဆောင်ပေးပြီး သူကနေမှတဆင့် အဓိကပေါက်ကွဲယမ်းကို ဖောက်ခွဲပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Figure 2. Rocket Propelling Grenade (RPG)
ဗုံးကိုယ်ထည်ရဲ့ အလည်အူတိုင်တည့်တည့်မှာ စနက်အုံ နှစ်ပိုင်းကို ချိတ်ဆက်ပေးထားရတဲ့ လျှပ်ကူးချောင်း​ ၇ ရှိနေလို့ ဒုံးကျည်ကိုယ်ထည်ထဲမှာ ဓာတုအဆိပ်​ (ဘူး/အိတ်)​ ထည့်သွင်းမြှုပ်နှံဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။ ပေါက်ကွဲယမ်းထဲမှာ ဓာတုအဆိပ်တွေ တခါတည်း ရောနှောအသုံးပြုဖို့ ဆိုတာကလည်း အဆိပ်ဓာတ်သင့်မှု အန္တရာယ်များလှပါတယ်။ သည့်အတွက် ဓာတုအဆိပ်တွေကို သီးသန့် ထည့်စရာ(ဘူး/အိတ်)​ တခုခုထဲ အလုံပိတ် ထည့်ပြီးမှသာ ဗုံးကိုယ်ထည်တွင်းက ပေါက်ကွဲယမ်းတွေအကြား သီးခြားမြှုပ်နှံ အသုံးပြုကြပါတယ်။
ခြေလျင်ခြေမြန် တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့က ရဲဘော်တွေ အာ.ပီ.ဂျေလို့ ခေါ်နေကြတဲ့ အာရ်.ပီ.ဂျီ အမျိုးအစားဒုံးကျည်မှာလည်း​ ၈၁ မမ နောက်ပွင့်ရိုင်ဖယ်လ် ဒုံးကျည်နည်းတူ လျှပ်စစ် စနက်အုံ အသုံးပြုတဲ့အပြင် အရွယ်အစား​ ​သေးငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဓာတုအဆိပ် ထည့်သွင်း​ အသုံးပြုဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။
၁. ကားလ်ဂူးစတပ်ဖ် – Carl Gustav
၂. မီးခိုးဒုံး – Smoke round
၃. ဒုံးပစ်လောင်ချာ – Recoilless Gun
၄. ရှေ့ပိုင်းစနက်အုံ – Nose fuze
၅. သလင်းကျောက်ပြား – Quartz
၆. နောက်ပိုင်းစနက်အုံ – Base fuze
၇. လျှပ်ကူးချောင်း – Conducting rod
ထမံသီရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကြောင့် လူပေါင်း ၄ သောင်းခွဲကျော် ပြောင်းရွှေ့ခံရနိုင်
Published on December 8, 2011 by နော်နိုရင်း
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မယူးဒေလီမြို့ အိန္ဒိယပါလီမာန် အဆောက်အဦရှေ့ရှိ ဂျန်တားမန် တားပန်းခြံမှာ ကူကီးလူမျိုးတွေက ထမံသီရေကာတာ စီမံကိန်း ရပ်တန့်ရေး တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။
မြန်မာနဲ့ အိန္ဒိယ အစိုးရတို့ ပူးပေါင်းပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်း အနောက်မြောက်ပိုင်း ချင်းတွင်းမြစ်ပေါ်ရှိ ထမံသီအနီးမှာ တည်ဆောက်မယ့် ကြီးမားတဲ့ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကြောင့် လူထု ၄ သောင်းခွဲကျော် ရွှေ့ပြောင်းခံရနိုင်တယ်လို့ ကူကီးအမျိုးသမီးများဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးအစည်းအရုံး (KWHRO) က ဒီနေ့ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဆည်ဆောက်လုပ်မယ့် ထမံသီစီမံကိန်းဒေသက လူပေါင်း ၂၄၀၀ ကျော်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ကတည်းက အဓမ္မ ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရတယ်လည်း အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ထမံသီဆည်ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကို ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းဖို့နဲ့ နေရာပြောင်းရွှေ့ခံထားရတဲ့ ဒေသခံတွေကို ပြန်နေခွင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတာ ဖြစ်တယ်လို့ KWHRO ရဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ငိုင်ငိုင်းက ပြောပါတယ်။
“ကျမတို့လောလောဆယ် အခြေအနေမှာ ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ ပြည်သူလူထု ၂၄၀၀ ကျော်က ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ ဆုံးရှုံးရတယ်၊ လယ်ယာမြေတွေ ဆုံးရှုံးတယ်၊ တဆက်တည်းမှာပဲ လူမှုရေးဒုက္ခတွေ သူတို့ကြုံတွေ့နေရတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ နစ်နာကြေးလည်း ပေးထားတာ မရှိဘူး။ အဓမ္မပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတယ်။ ပြောင်းရွှေ့တဲ့နေရာမှာလည်း တခြားဒေသတွေ ပြောင်းလို့မရဘူး၊ သူတို့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ နေရာမှာပဲ ပြောင်းရွှေ့ရတယ်။
“ဆိုတော့ ရွာသစ်မှာ ရောက်နေတဲ့ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတွေဟာ စားဖို့သောက်ဖို့တောင်မှ အခြေအနေ အတော်လေးဆိုးနေတယ်။ အဲဒီ မြို့သစ်အခြေအနေက နည်းနည်းလေး အထက်ပိုင်းမှာ တည်ထားတယ်။ ရေရှားပါတယ်၊ မြေက ခြောက်သွေ့တဲ့အခါမှာ စိုက်ပျိုးဖို့အတွက် လုံးဝ အဆင်မပြေဘူး။ ပြီးလို့ရှိရင် ရေမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျန်းမာရေးလည်း ထိခိုက်တယ်။ စိုက်ပျိုးမြေက မကောင်းတဲ့အခါမှာ စားဖို့သောက်ဖို့တောင်မှာ သူတို့မှာ လုံလုံလောက်လောက် မရနိုင်ဘူး။
“အကယ်၍သာ ဒီဆည်ကို ဆက်ဆောက်မယ်ဆိုရင် ပြည်သူလူထု ၄ သောင်းခွဲကျော်ဟာ ဒီ့ထက်ဆိုးရွားတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ၊ ပြဿနာတွေ၊ ဆုံးရှုံးမှုတွေကို ကြုံတွေ့ရမှာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့က ဒီလုပ်ငန်းကို အမြန်ဆုံးရပ်တန့်မှာသာလျှင် ပြည်သူတွေက ဒုက္ခမရောက်မှာ။”
ထမံသီရေကာတာစီမံကိန်း အမြန်ဆုံး ရပ်တန့်ပေးဖို့နဲ့ ဒီဆည်ကို လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံအမျိုးသား ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း (NHPC) နဲ့ အိန္ဒိယရှိ မြန်မာသံရုံးတို့ကိုလည်း ကန့်ကွက်လွှာ ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေက ပြည်သူတွေ တောင်းဆိုမှုကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်က မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့တဲ့အတွက် ဒီထမံသီစီမံကိန်းကို ရပ်တန့်ပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်းလည်း ဒေါ်ငိုင်ငိုင်းက ပြောပါတယ်။
ထမံသီရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းဆည်ဆောက်ရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရက အိန္ဒိယနိုင်ငံ အမျိုးသား ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်းနဲ့ ၂၀၀၄ ခုနှစ်က နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၈ ခုမှာလည်း လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန အမှတ်(၁)နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အမျိုးသားရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်းတို့ နားလည်မှု စာချွန်လွှာသစ် ထပ်မံ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။
ဒီရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကနေ လျှပ်စစ်မဂ္ဂါဝပ် ၁၂၀၀ ထုတ်လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အိန္ဒိနိုင်ငံသို့ ရောင်းချဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ အကြောင်းလည်း အစီရင်ခံစာထဲ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကြာသပတေး, 08 ဒီဇင်ဘာ 2011
ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ - ဒေသတွင်းမှာ တရုတ်ရဲ့ စစ်အင်အား ကြီးထွားလာနေတာ အပေါ် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ထင်ကြေးတချို့ ရှိနေပေမဲ့လည်း သမ္မတ အိုဘားမားကတော့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးကို ဆက်ပြီး ထိန်းထားနိုင်ဖို့အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထွန်းထွန်း | ကြာသပတေးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၀၈ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၄၈ မိနစ်
ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ယင်းအပြင် ရန်ကုန်မြို့တွင် ကုန်စည်ပြပွဲ ကျင်းပခွင့် ပေးရေးနှင့် ဒါကာ/စစ်တကောင်း - ရန်ကုန် တိုက်ရိုက် လေကြောင်းပျံသန်းရေးအတွက်ပါ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက တောင်းဆိုခဲ့သည်ဟု ပူးတွဲကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည်။
၂ဝဝ၈ ခှုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိ လူဦးရေ သန်း ၁၆ဝ ရှိ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံနှင့် ကမ်းလွန်ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက် ကိစ္စများ အတွက် နှစ်နိုင်ငံကြား ရေပိုင်နက်ပိုင်ဆိုင်ရေးဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ခဲ့ရာ ပင်လယ်ပြင် ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ နိုင်ငံတရာ တရားရုံး - ITLOS တွင် တရားရင်ဆိုင်နေရဆဲ ဖြစ်သည်။
မြန်မာဖမ်း အိန္ဒိယသတင်းထောက် နှစ်ဦးကိစ္စ ဝန်ကြီးချုပ်ထံ စာပို့
ကိုပေါက် | ကြာသပတေးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၀၈ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၅၉ မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာအာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးထားသည့် အိန္ဒိယ သတင်းထောက်နှစ်ဦးအရေး ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အာသံ သတင်းစာဆရာများအသင်း Journalists’ Forum of Assam က ဝန်ကြီးချုပ် မန်မိုဟန်ဆင်း Manmohan Singh ထံ စာရေးသား တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ကြာသပတေးနေ့က ပေးပို့လိုက်သော အဆိုပါစာတွင် မြန်မာအစိုးရ ဖမ်းဆီးထားသော သတင်းထောက်နှစ်ဦးလုံး
ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း ကြားသိရသော်လည်း အာသံပြည်သို့ ယခုချိန်ထိ ပြန်မရောက်သေးသဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန် လျက်ရှိကြောင်း ပါရှိသည်။
“အဆက်အသွယ်လည်း မရရှိ၊ ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ် ရောက်နေမှန်းလည်း မိသားစုနှင့်အတူ မသိရှိရသေးပါ။ သို့အတွက် ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် ဤသတင်းထောက်များ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ရောက်ရှိရေးအတွက် အရေးတယူ ဆောင်ရွက်
ပေးပါရန်” အာသံပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အထက်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တဦးလည်းဖြစ်သည့် ဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့ အာသံ သတင်းထောက်များအသင်းက တောင်းဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။
လွတ်မြောက်လာသော သတင်းထောက်နှစ်ဦးမှာ ဒီဇင်္ဘာ ၄ ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ် မိုးရေးမြို့သို့
ပြန်ရောက်မည်ဖြစ်၍ ဆက်သွယ်စုံစမ်းခဲ့သော်လည်း အကြောင်းမထူးသည့်အပြင် ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အိန္ဒိယ
ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာအစိုးရနှင့် အာသံအစိုးရတို့က မည်သည့်ထုတ်ပြန်ချက် တစုံတရာမှ မထုတ်ပြန်
JFA က ရန်ကုန်ရှိ အိန္ဒိယသံရုံးသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းသော်လည်း သံရုံးအနေဖြင့် မည်သည့် သတင်းအချက်အလက်မှ မသိရှိကြောင်း ငြင်းဆန်လိုက်သည်ဟု ဆိုသည်။
အာသံပြည်နယ် Guwahati မြို့မှ နေ့စဉ်ထုတ် Seven Sisters Post သတင်းထောက် Rajiv Bhattacharya နှင့် ဓါတ်ပုံသတင်းထောက် Pradip Gogoi တို့နှစ်ဦးမှာ မြန်မာပြည်တွင်း ခိုအောင်းနေထိုင်လျက် ရှိသော အာသံသူပုန် ULFA ထိပ်သီးခေါင်းဆောင် Barua နှင့် အင်တာဗျူးလုပ်ရန် အောက်တိုဘာ လလယ်ပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွါသွားခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ ၎င်းတို့နှင့် အဆက်အသွယ် မရရှိတော့ကြောင်း အယ်ဒီတာ Subir Bhumik က ရုပ်မြင်သံကြားအင်တာဗျူးတခုတွင် ဖြေကြားသွားသည်။
“ဒါဟာ သူ့ပရောဂျက်ပဲ။ ဒီတာဝန်ကိုယူဖို့ သူ ပိုင်းဖြတ်ပြီးသားပါ” ဟု ပြောသည်။
ကိုယ်တိုင် သတင်းထောက်တဦးလည်းဖြစ်သည့် Rajiv ၏ ဇနီးသည် Rashmi Sharma မှာလည်း သူမ၏ခင်ပွန်းထံမှ လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပါတ်က “မာကြောင်း သာကြောင်းနှင့် အင်တာဗျူးအတွက် စောင့်ဆိုင်းနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း” လက်ကိုင်ဖုန်း စာတိုလေး SMS တခု သာ လက်ခံရရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
၎င်းသတင်းထောက်နှစ်ဦးမှာ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်တွင် ULFA ဒုတိယ စစ်ခေါင်းဆောင် Jivan Mohan နှင့်အတူ
မြန်မာစစ်တပ်မှ အဖမ်းဆီးခြင်းခံရကာ ခရီးဆောင်ကွန်ပျူတာ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့် ကင်မရာများအား သိမ်းဆီးပြီး ၎င်းတို့နှစ်ဦးအား ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း ပြည်ထဲရေး အတွင်းဝန် RK Singh အား ကိုးကား၍ ဒီဇင်္ဘာ ၄ ရက် သတင်းများတွင် စတင်ပါရှိလာခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော် Jivan Mohan အား ဖမ်းဆီးမိသည်ဟူသော သတင်းမှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း မြန်မာအာဏာပိုင်များဘက်မှ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ငြင်းဆိုလိုက်သည်။
“တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်မှာ အိန္ဒိယ သတင်းထောက်နှစ်ဦး ဖမ်းဆီးမိကြောင်း မြန်မာအာဏာပိုင်တွေဘက်က အိန္ဒိယ
နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနကို အသိပေးလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Jivan Mohan ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တော့ ဖမ်းဆီးထားသူ မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်” ဟု ပြည်ထဲရေး ဒုအတွင်းဝန် (အရှေ့မြောက်ဒေသဆိုင်ရာ တာဝန်ခံ) Shambu Singh က ပြောသည်။
သတင်းထောက်များ အင်တာဗျူးရန် သွားသည့် ULFA စစ်ဦးစီးချုပ် Barua မှာ တရုတ်ပြည် Chengdu ပြည်နယ်နှင့်
မြန်မာ ကချင်ပြည်နယ်အကြားဒေသအတွင်း လှုပ်ရှားနေသည်ဟု အိန္ဒိယ ထောက်လှမ်းရေး သတင်းများက ဆိုသည်။
Bhattacharya နေရပ်ရင်းသို့ ပြန်မရောက်သေးသော်လည်း ၎င်း၏ အထူးဆောင်းပါး Myanmar main base for NE rebels မှာ ဒီဇင်္ဘာ ၅ ရက်ထုတ် Seven Sisters Post သတင်းစာ မျက်နှာဖုံးတွင် ဖော်ပြပါရှိလာသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပြည်နယ်များမှ ခွဲထွက်သူပုန် ၉ ဖွဲ့မှာ မြန်မာ့မြေပိုင်နက်အတွင်း စခန်း ၆၄ ခု တည်ဆောက်လှုပ်ရှားနေကြသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့ ၉ ဖွဲ့ထဲမှ PLA, UNLF, KYKL, KCP နှင့် PRPK (P)တို့မှာ တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြပြီး ကချင်နှင့် ချင်းတောင်ဒေသများတွင် စခန်းများ တည်ဆောက်ထားကြသည်။
အိန္ဒိယ အစိုးရနှင့် အပစ်ရပ်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ဆဲ အဖွဲ့များဖြစ်ကြသည့် NSCN (IM), NSCN (K) နှင့် KNA တို့ကလည်း မြန်မာနယ်စပ်တွင် စခန်းများ တည်ဆောက်ထားသည်။ ထို့ပြင် PRPK (P) မှ ခွဲထွက်အုပ်စု တစု
ဖြစ်သည့် UPPF ကလည်း မြန်မာဘက်ခြမ်းတွင် စခန်း ၅ ခု တည်ဆောက်ထားသည်ဟု မဏိပူပြည်နယ် အစိုးရက
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။
“တချို့ကတော့ နားနေအိမ်ယာတွေနဲ့ ပိုကြီးတဲ့ စခန်းတွေ အတွက် ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ ဂိုဒေါင်တွေပါ။ ချိုဝန်းတောင်
ကြား၊ လချန်းနဲ့ အွန်ဂျီယာတို့ကတော့ သင်တန်းအဆောင်အအုံ ပစ္စည်းတွေအစုံအလင်နဲ့ သူပုန်တွေ အလွန်ဂရုထား တဲ့ နေရာတွေထဲက တချို့ဖြစ်ပါတယ်” ဟု အိန္ဒိယ ဗဟိုအစိုးရ အကြီးတန်းအရာရှိတဦးက ဆိုသည်။
အဆိုပါ စခန်း ၆၄ ခုတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း တကားဒေသအတွင်း မဏိပူသူပုန်များ တည်ထောင်ထားသည့်စခန်းများ မပါဝင်သေးပေ။
ထောက်လှမ်းရေးသတင်းများအဆိုအရ ကချင်နယ်စပ် ချင်းတွင်းမြစ်အနီးတွင် ULFA နှင့် NDFB တို့၏စခန်းများ လည်း တည်ရှိနေသည်ဟုဆိုသည်။
အိန္ဒိယအစိုးရက ဤစခန်းများအား ရှင်းလင်းပေးရန် မြန်မာအစိုးရအား ကြုံတိုင်း ဖိအားပေးပြောဆိုမှုများ ပြုလုပ်လာ ခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ်မျှ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း တိုးတက်မှု အနည်းငယ်သာ ရှိသေးသည်။
နှစ်နိုင်ငံ တာဝန်ကျ တပ်မှူးများ လစဉ် တွေ့ဆုံလေ့ရှိပြီး တပ်ရင်း တပ်မမှူးများကလည်း သုံးလတကြိမ် တွေ့ဆုံလေ့ ရှိကာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အရာရှိများကလည်း ခြောက်လတကြိမ် တွေ့ဆုံလေ့ ရှိကြသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်၊ ရန်ကုန်မြို့ စိန့်မေရီ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း နှစ်တစ်ရာပြည့် အခမ်းအနားသို့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်စဉ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရောက်ရှိလာတဲ့ ဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီး Martino ဟာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ ဆက်ဆံရေး ပွင့်လင်းလာတဲ့ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံက အခြေအနေတွေအအတွက် Vatican က ကောင်းချီးပေးလိုက်တာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ စိန့်မေရီ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း နှစ်တစ်ရာပြည့် အခမ်းအနားမှာ တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ ရန်ုကုန် ကက်သလစ် အသင်းတော်ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ သွားတာဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးအုံးကြိုင်က ပြောပါတယ်။
RFA< ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ် အကျယ်ချုပ်က ပြန်လည် လွတ်မြောက်မှု တစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တစ်ရပ်ကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ရုံးချုပ်တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက် က ကျင်းပနေစဉ်။ ဓါတ်ပုံ - RFA ဒီအခမ်းအနား ဖြစ်အောင် စီစဉ်နေသူတွေဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဘယ်လ်ဆု ချီးမြှင့်ခံရချိန်မှာ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်က လွတ်မြောက်ရေး တောင်းဆိုလို့ အဖမ်းခံရသူ ကျောင်းသားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ကို ၁၀ ဒီ (10/D) ကျောင်းသားများလို့ နာမည်ပေးထားကြောင်း အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုကိုကြီး(စမ်းချောင်း) က ပြောပါတယ်။ အဲဒီနေ့ ကျင်းပမယ့် အခမ်းအနားကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အင်န်အယ်လ်ဒီ ခေါင်းဆောင်တွေလည်း တက်ရောက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခမ်းအနားမှာ ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်က ငြိမ်းချမ်းရေး စာတမ်း တစ်စောင် ဖတ်ကြားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာပဲ ရန်ကုန် ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ပိဋကတ်စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားပါ တစ်ပြိုင်တည်း ကျင်းပမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီအခမ်းအနားကို သံတမန်တွေအပြင် အများပြည်သူတွေပါ တက်ရောက်နိုင်အောင် စီစဉ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင်အတွက် ရိုက်ကွင်းနေရာ အသုံးပြုခွင့် ပေးမည်ဟု ပြော 2011-12-08 မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိဇာတ်ကား ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းနဲ့ စတူဒီယိုတွေ တည်ဆောက်ရေးမှာ အသုံးပြုနိုင်အောင် ပဲခူးတိုင်းအတွင်းက မြေဧက ၁၀၀ ကို မြန်မာအစိုးရက အသုံးပြုခွင့်ပေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဇာတ်ကားကို လာမယ့် ၂၀၁၅ ခုမှာ အပြီးရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင် နယ်ပယ်က ထင်ရှားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်က တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးအပြီး အစိုးရဘက်က အခုလို အကူအညီ ပေးမယ်လို့ ကြားရတာပါ။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်း နေရာ ရရှိရေးအတွက် အစိုးရထံ အကူအညီတောင်းခံရာမှာ ယခင်က နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး၊ ယခု ပဲခူးတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက ရန်ကုန် ပဲခူးကားလမ်းဘေး ပဲခူးမြို့အဝင်နားက မြေဧက ၁၀၀ ခွင့်ပြုမယ်လို့ သတင်းရကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဇာတ်ကား ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီဝင် ဒါရိုက်တာ ကိုသူရ ခေါ်ကိုဇာဂနာက ပြောပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ ဇာတ်ကားအတွက် လောလောဆယ်မှာ ဇာတ်ညွှန်းရေးသားမယ့် သုတေသန ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီး ဒါရိုက်တာ ဦးမိုးသူက ဦးဆောင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်မယ့်သူကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ ကော်မတီ တစ်ရပ်ကိုလည်း မကြာခင် ဖွဲ့စည်းမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးဖွားခဲ့တဲ့ အညာဒေသ လူငယ်တွေထဲက အဓိကထား ရွေးချယ်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးရေးမှာ အသုံးပြုမယ့် ရိုက်ကွင်း အပြင်အဆင်တွေ လေ့လာနိုင်ဖို့ ကိုဇာဂနာ ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ဟာ လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်း ထိုင်း စင်္ကာပူနဲ့ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံတွေက စတူဒီယိုတွေကို သွားရောက် လေ့လာဖို့ ရှိကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒါရိုက်တာ ကိုသူရ ခေါ် ကိုဇာဂနာကို အာရ်အက်ဖ်အေ ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
သတင်းစာဆရာများ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး ကော်မတီ CPJ အင်တာနက် စာမျက်နှာ။
ဒီအကြောင်းကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နယူးယောက် အခြေစိုက် သတင်းစာဆရာများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ကော်မတီ CPJ က မနေ့က ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့် စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ CPJ ရဲ့ လေ့လာချက်အရ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်အထိ အီရန်၊ အီရီထရီးယား၊ တရုတ်၊ မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်၊ တူရကီနဲ့ ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွေဟာ သတင်းထောက်တွေကို ဖမ်းဆီးထောင်ချမှု အများဆုံးနိုင်ငံတွေလို့ ဆိုပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်လွှား အကျဉ်းချခံထားရတဲ့ သတင်းထောက် အရေအတွက် ၁၇၉ ဦးရှိတဲ့ အတွက် ၁၉၉၆ ကစတွက်ရင် အခုအချိန်မှာ အများဆုံးလို့ ဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံအလိုက် ဖော်ပြရာမှာတော့ အီရန်နိုင်ငံက ၄၃ ဦးနဲ့ အများဆုံး ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ကတော့ သတင်းထောက် ၁၂ ဦးကို ဖမ်းဆီး အကျဉ်းချထားတာကြောင့် စတုတ္ထ အများဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်နေပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အတွင်းရေးမှုးဟောင်း ဥ...
ဗကသ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုဇော်လင်းထွန်းရဲ့ ရက်...
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရန်ကုန်မြို့ စိန...
ပြင်သစ်နိုင်ငံအခြေစိုက် နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်မျာ...
၂၀၁၁ခုနှစ် ပဒိုမန်းရှာ လူငယ်ခေါင်းဆောင်ဆုရှင်ကို စ...
ဘုရင် ကို အကြည်အညိပျက်စေမှု နဲ့အမေရိကန် ဘလောက်ဂါ ...
ကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲဘော် ကိုဇော်လင်းထွန်းအတွက် ရက်လည်ဆ...
ထမံသီရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကြောင့် လူပေါင်း ၄ သောင...
ဒုက္ခသည်နှင့် အထောက်အထားမဲ့အရေး အမြန်ဖြေရှင်းဖို့လိ...
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်း...